ब्याकलिङ्कहरू ट्र्याक गर्ने मौकाहरू के हो?
सामान्यतया बोलपत्र, इनबाउन्ड लिङ्कहरू अन्य साइटमा कुनै पनि सक्रिय URL हो भने तपाइँको प्रयोगकर्ताले तपाइँको साइटमा क्लिक गर्नु भएको बेला क्लिक गर्नुहुनेछ।. यो शब्दमा एक ब्याकलिङ्क प्रोफाइल वेबको वरिपरि सबै उल्लेखहरूको एकत्र हो जसले तपाईंको डोमेनमा पुर्याउँछ. गुणवत्ता र तपाईंको बजार आला ब्याकलिङ्कका लागि प्रासंगिक तपाईको वेबसाइट रेटिङ सुधार गर्न र तपाईंको पृष्ठहरूमा लक्षित यातायात ल्याउन सक्छ. र उपाध्यक्ष खराब गुणस्तर स्प्यामी वेबसाइटहरु बाट लिङ्क जुन Google दिशानिर्देशहरू पछ्याउँदैन तपाईको खोजी इन्जिन अनुकूलन प्रयासहरू हटाउन र रैंकिङमा गिरावट हुन सक्छ।.
भर्खरै स्थापित Google पेंगुइन फिल्टरको अनुसार, सबै कम गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू जुन स्पाम वेबसाइटहरू बाट आएका हुन्छन्, भक्त हुन आवश्यक छ, र वेबसाइटहरू जुन यो धोखाधडी गतिविधिमा संलग्न थिए - bonus codes for slots lv. Google ले केवल ती ब्याकलिङ्कहरू स्प्यामी, कम गुणस्तरका साइटहरू, सटीक मिलान एंकर पाठ, ब्लग टिप्पणी लिङ्कहरू, वा लिङ्क खेतहरूबाट आउँछन्।.
गुणस्तरको इनबाउन्ड लिङ्कहरू पत्ता लगाउन ठाउँहरू
नि: शुल्क विकल्पहरू प्राय: वेबसाईट मालिकहरू लाई निम्न डेटा सूचीका साथ ब्याकलिंक युआरएलहरूको सूची प्रदान गर्दछ, यी ब्याकलिङ्कहरूको पाठ लन्च गर्नुहोस्। तिनीहरूको अधिकार स्कोर.
तथापि, यदि तपाईं लिङ्क इमारत विश्लेषणात्मक उपकरणहरूको लागि भुक्तान गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई माथिको मेट्रिक्सको अतिरिक्त निम्न सेवाहरू प्रदान गरिनेछ: जटिल र विस्तृत रिपोर्टिङ, निरन्तर ब्याकलिङ्क निगरानी, ​​ब्याकलिङ्क प्रोफाइलको संवर्धन, तपाईको साइटमा विभिन्न पृष्ठहरूमा पाठ पोष्ट हुँदैछ, सम्भावित खराब बाहिरी लिङ्कहरूको बारेमा अधिसूचनाहरू, अतिरिक्त प्राधिकरण मेट्रिकहरूको बहुतायत, र यति.
त्यहाँ धेरै सशुल्क लिंक इजाजतपत्र सेवाहरू छन् जुन आफ्ना ग्राहकहरूलाई निःशुल्क परीक्षण अवधि (एफ. ई. सेमील्ट डिजिटल कम्पनी). यसले तपाइँलाई उनीहरूको सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न मौका दिन्छ र निर्णय गर्दछ कि यो तपाईंको ध्यानको योग्य छ वा होइन. तपाईले सेवाहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंको व्यवसायको आवश्यकता र बजेट पूरा गर्नेछ। अधिक भुक्तानी लिङ्क निर्माण सेवाहरूले तपाईंलाई बहुमूल्य मेट्रिक्स प्रदान गर्न र तपाइँको लिङ्कको गुणस्तर लिङ्क रस प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन सक्छ।.
उपकरणहरूले तपाईंलाई ब्याकलिङ्कहरू ट्रयाक गर्न मद्दत गर्नेछ
ब्याकलिंक प्रोफाइल परीक्षक (1 9)
यो उपकरणले निःशुल्क र सशुल्क सेवाहरू दुवै प्रदान गर्दछ।. एक निःशुल्क सेवा पछाडि पछाडि ब्याकलिङ्कहरूको लागि केहि समय लाग्दैन. यसले तपाईंको पहिलो हजार ब्याकलिङ्कहरू जाँच गर्नेछ. यदि तपाइँलाई विस्तृत अनुसन्धानको आवश्यकता छ भने तपाईले तपाइँका सबै ब्याकलिङ्कहरू हेर्नको लागि अर्को तरिका खोज्नुपर्छ. यो सेवाले तपाईंलाई प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रदान गर्दछ जुन पृष्ठको यूआरएल समावेश गर्दछ जहाँ तपाईंको साइटमा ब्याकलिङ्क राखिएको छ, लिङ्कको लंगर पाठ, अन्य महत्वपूर्ण मेट्रिक्स (पेजरङ्क र ओबीएल). "सबै बाह्य ब्याकलिङ्कहरू" प्रकार्यले तपाइँलाई सबै साइटहरू देखाउँदछ जुन तपाईंको डोमेन वा सामग्रीमा उल्लेख गर्दछ. यसबाहेक, तपाईं आफ्नो ब्रान्ड उल्लेख भएको ठाउँहरू जाँच्न सक्नुहुन्छ.
सेल्टल्ट ओटो एसईओ (1 9)
यो उपकरणले पनि ग्राहकहरुको परीक्षण कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।. उदाहरणको लागि, लिंक इमारत सेवाको पहिलो महिना $ 999को खर्च हुनेछ. यो परीक्षण महिनाको समयमा, तपाइँ एसईओ पदोन्नति, लिङ्क लिङ्क निर्माण अभियानको लागि सान्दर्भिक किबोर्डहरू चयन गर्न मौका पाउँदछ र प्रबन्धन समर्थन प्राप्त गर्नुहोस्. यदि तपाईं बढी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले निम्न महिनाको लागि $ 99 तिर्नुपर्छ. यस रकमको लागि तपाईले सेवाहरूको एक विस्तृत दायरा प्राप्त गर्नुहुनेछ:
खोजशब्द अनुकूलन र छिटो कार्बनिक ट्राफिक विकासको लागि एक्सटेन्सन;
लिङ्क निर्माण अभियान उन्नत अपग्रेड परिणाम र सुधारिएको खोज सर्तहरूको सूचीमा आधारित;
रिपोर्टबाट सिफारिसहरूको कार्यान्वयन र वेबसाइटमा सबै अवस्थित अस्तित्वहरू मिलाउने.